Timaha loo jaro dhalinyarada - kan ugu casrisan iyo asalka | Niman qurux badan
Wiilasha qaan-gaarka ah waxay ku jiraan marxaladda korriinka ee ugu wanaagsan ee aadanaha. Inkasta oo ay xoogaa iska hor imanayso shucuurta, waxa ay sidoo kale ku jirtaa kobaca shakhsi ahaaneed iyo meesha bilaabo oo hagaajiyaa sawirkaas shakhsi ahaaneed. Wiilashu waxay jecel yihiin inay bixiyaan sawirka amniga, taasna waannu u doorannay timaha ugu fiican ee dhalinyarada
Sannadkan dhimista ayaa sii socota aad loo xiiray oo xoogaa mug leh dusha sare. Timo kasta waa kan calaamadayn doona shakhsiyadda qof walba iyo dhiirigelintayada waxaad dooran kartaa midka ugu habboon jirkaaga.
1 Timo-jarida Sare
2 Fade Hooseeyo iyo Mid Fade
3 timo qaloocan
4 timo dhaadheer oo xiiran
5 timaha sinta
6 Goyn saddex xagal ah oo ku taal aagga dambe
7 Timaha la xiiray ama qaabka ciidamada
8 Qaabka timaha ee Pompadour
9 Timo qallafsan
Weli waa qaabka kan dejinaya isbeddelka, Inta badan qaababka iyo taabashada waxay ka bilaabmaan qaabkeeda taasoo keenta nooc kale oo timo ah. Iyadoo ku xiran sifooyinka, mid kastaa wuxuu yeelan doonaa magaciisa, iyo gooynta Fade waa in la ogaadaa in ay tahay tan ugu waxtarka badan iyo shaqeynta.
Waa kan aad u khuseeya dhalinyarada dhexdooda waxaana lagu gartaa gooyo nadiif ah oo casri ah oo leh dhinacyo aad u xiiran. Dusha sare aad bay u dheertahay oo gabalkeedu wuxuu ka bilaabmaa xagga sare ee dhinacyada.
Fade Hooseeyo iyo Mid Fade
Raac khadka goynta Fade laakiin leh kala duwanaansho. El hoos u dhaca Waxay leedahay halabuur isku mid ah, kaliya in ay libdhidu ka bilaabato aagga hoose ee dhinacyada iyo aagga ka dambeeya madaxa. Isla sidaas oo kale ayaa ah Midow fade, qallafsanaantaadu waxay ka bilaabataa qaybta dhexe ee aaggan iyo ilaalinta timo isku mid ah.
Kuwa timaha qalloocan waxaa sidoo kale jira jeexan kuwaas waxay siiyaan cusub iyo casriyeyn. Halabuurkeedu wuxuu ina xasuusin doonaa qaabka Fade, oo aad u jeexan ama laga xiiray dhinacyada iyo gooyn dheer oo korka ah. Goyntan ayaa ah mid aad loo jecel yahay in qaar badan oo ka mid ah wiilasha ay rabaan timo qalloocan oo ay helaan ogolaansho dukaanka timo-jaraha.
Si loo gaaro timahan waxaa lagama maarmaan ah in la haysto ka tag sare oo dhererkiisu dheer yahay oo ku filan si dhowr curls looga tagi karo inay dhacaan ama si dabiici ah u maroojiyaan. Timaha waxaa lagu shanleyn doonaa faraha waxaana lagu dari doonaa wax jel u eg si loo calaamadiyo qaabkeeda.
timo dhaadheer oo xiiran
Timo dhaadheer ayaa leh aan dhammaadka lahayn ee goynta iyo noocyada kala duwan ee qaababka. Waxaad gooyn kartaa dhinacyada oo kaliya oo timaha u daa inay ku dhacaan dhinacyada. Kadibna waxay ku hadhi si ay u muujiso meelaha la xiiray oo leh qaab sare oo kor u kaca hindise. Timaha lulsan, waxaad isku dayi kartaa inaad baxdo safka hore ee sasabanaya, oo leh kareem yar oo matte hagaajin ah si ay ugu ekaato mid dabiici ah.
Goynta noocaan ah waxaa loogu talagalay wiilasha geesinimada leh, timo dheer oo la ururiyey xagga sare oo ay bixiyaan a taabashada guridda. Qaabkiisa waxaa weheliya gadhka waaweyn iyo kuwa duurka ah, laakiin wax walba mar walba lama gaadhi karo. Dhalinyaro badan ayaa wali aan siinin gadhka qaro weyn, markaa xidhashada nooca timaha ayaa la bixin karaa la'aanteed. Si aad u awooddo inaad timaha u ururiso si nidaamsan, waxaad isticmaali kartaa jel calaamad u ah aagga oo leh matte dhammayn.
Goyn saddex xagal ah oo ku taal aagga dambe
Goynta dhabarka dambe ee madaxa waxay sidoo kale yeelan kartaa casriga iyo xarrago. Waxay abuurtaa isbeddel badan oo lagu xidho gooyo saddex xagal ama tilmaame. Ma aha in si toos ah loo gooyay, laakiin in ka badan oo qaab gaar ah. Habka timaha ama qaababka la socda waxay noqon karaan kuwo badan oo lagu sharraxay, ficil ahaan ku habboon mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Timaha la xiiray ama qaabka ciidamada
Timo jarista Waa sahlan, degdeg ah iyo timo adag. Wiilasha da'yarta ah waxay inta badan u aadaan timo-timo geesinimo leh oo dhaadheer, laakiin qaarkood waxay door bidaan inay aad u gaabiyaan. Goyntani waxay soo jiidan doontaa dareen badan oo ku wajahan wejiga qofka waxayna ka jirtaa mishiinka la gooyey lambarka 1, oo sidoo kale loo yaqaan Buzz, ku dhawaad ​​dhererka aan jirin. Waxaad ka tagi kartaa dhinacyada si dhab ah oo xiiran oo leh wax yar oo ka sarreeya madaxa.
Timaha Pompadour waxay ina xasuusineysaa pompadour caan ah oo uu caan ku ahaa Elvis Presley oo caan ahaa. Waxaan dammaanad qaadi karnaa inay ku sii socoto xariiqeeda, laakiin leh taabasho casri ah oo aad u badan. Waa gooyn qaabka ugu saafiga ah Hipster oo leh timo dheer oo dheeraad ah, oo si fiican u shanleysan oo madaxa korkeeda ah.
Halabuurkeedu waa khariban, inkastoo ay leedahay muuqaal taxadar la'aan ah, haddana hubaal waa mid ka mid ah timaha sii habayn iyo meelayn. Qaabkeedu waa mid tilmaamaya, oo leh qaabab qallafsan, gooyay daadan iyo meel sare oo madaxa ah oo leh xadhig bilaash ah. Ragga qaar baa ku sharad inay xidhaan lagu midabeeyay timo cad cad ama midab yar oo khafiif ah oo lagu dhammeeyey jel matte ah si loo siiyo sawirka xitaa khalkhal badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » timo-jaridda dhallinta
Sida loo labbisto si fiican 40 jir